ဦးဆုံးအထိအတွေ့ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 9, 2021 Author admin	Comments Off on ဦးဆုံးအထိအတွေ့
အေးအေးမော်သည် မောင်မောင်နှင့်မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။မောင်မောင်သည် တောမှနေ၍ မြို့ကျောင်းလာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကိုးတန်းအောင်စာရင်းထွက်သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲအောင်သဖြင့် ဝမ်းသာအားရစွာ အိမ်သို့ပြန်လာခြင်းပင်။ “….ကျနော် စာမေးပွဲအောင်တယ်ဗျ…ဟားဟား….” “…..ဟဲ့….ဟဲ့….ငမောင်….နင်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်…..” “….ဟားဟား….ပျော်လွန်းလို့ခင်မျာ……ဝမ်းသာလွန်းလို့ ကိုယ့်အမကိုယ်ဖက်တာဘဲဟာ……..”။
မောင်မောင်သည် ဝမ်းသာအားရစွာဖြင့်ပါးစပ်မှ တတွတ်တွတ်ပြောဆိုရင်း အေးအေးမော်ကို ပွေ့ဖက်မွေ့ရမ်းလိုက်သဖြင့် အေးအေးမော်ခမျာ ကုတင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်စလုံးပက်လက်လန်လဲကျသွားရရှာသသည်။ ထဘီမှာလည်း လျော့၍ နေမထိလေမထိသဖြင့် ဝင်းဝါနေတဲ့ရွေရင်အစုံပါ ပေါ်သွားရရှာသည်။ “….အိုး…..ငမောင်…..နင်တော်တော်မြူး…ဒီမှာ လုံချည်တောင်ကျွတ်ကုန်ပြီဟဲ့….” ယင်းကဲ့သို့ အေးအေးမော်ကပြောလိုက်သဖြင့်။
မောင်မောင်သည်…လူးလဲထလိုက်ပြီး ပြေလျောနေသော သူမရဲ့ထဘီကိုအပေါ်သို့ပြန်လည်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ရာမှ ဝင်းဝါမို့မောက်နေတဲ့ ရွေရင်ဖြိုးဖြိုးကို ဆုပ်ကိုင်မိသားဖြစ်သွားသည်။ “……ဟဲ့…..အို……ငမောင်……” “…..ကန်တော့…..မမအေး…..ကန်တော့ပါ…..ကျနော်…ပျော်လွန်းလို့ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်သွားတယ်…..မမရယ်….” ပါးစပ်ကသာ ယင်းကဲ့သို့ပြောနေပေမဲ့….ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့နို့ကိုတော့ မဖယ်ရှားမိဘဲ ရောရောင်ဆုပ်ကိုင်နေဆဲပင်………။
နူးညံ့အိထွေးသောအထိအတွေ့ကလူကို သွေးတိုးမြန်စေသလို ဓာတ်မတည့်သော ဖိုမသဘာဝမို့ အေးအေးမော်ခမျာ….ရှိန်းကနဲ….ဖိန်းကနဲတကိုယ်လုံးတုံအောင်ကြက်သီး ထသွားမိသလို…..ရုန်းကန်ဖယ်ရှားရမည့်အစား မောင်မောင်ရဲ့လက်ပေါ်မှနေ၍ မိမိရဲ့လက်တွေကို အုပ်ကိုင်နေမိလိုက်သည်။ မောင်မောင်ကလည်း အမှတ်မထင်ဆုပ်ကိုင်ထားမိတဲ့ အေးအေးမော်ရဲ့ ပြည့်ဖြိုးဖေါင်းကားနေတဲ့ နို့တွေကိုဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ဆော့ကစားနေမိပြန်သည်။
တကိုယ်လုံးမှလည်း သွေးစီးချောင်းတလျှောက် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည်မို့ အတွေ့အထိအပေါ်သာယာလာကာ……. မိန်းမောတွေဝေနေတဲ့ အေးအေးမော်ရဲ့ဖူးဖူးရွရွနွုတ်ခမ်းနှစ်လွာကို အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက……..မင်းသား၊မင်းသမီးနွုတ်ခမ်းစုပ်သလို ဖိကပ် နမ်းရှိုက်စုပ်ယူလိုက်မိသည်အထိ……အသိတရားတို့ဟာ…ဝေဝါးကုန်ကျသည်။ အေးအေးမော်မှာလည်း မောင်နှမဝမ်းကွဲခြင်း မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အသိတရားတွေ လက်လွတ်ပြီး။
မောင်မောင်ရဲ့ကျောပြင်ကိုပြန်လည်ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်အထိ…. အတွေ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားမိရရှာသည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် မထင်မှတ်ဘဲ…..မရည်ရွယ်ပါဘဲနှင့် လွတ်လပ်သောဆိပ်ကွယ်ရာတွင် လောက၏အဆုံးစွန်သော ခရီးတစ်ခုကိုဖြစ်သန်းကျဖို့ တာစူနေရာယူမိလိုက်ကြ၏။အေးအေးမော်သည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပင် ဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးနှစ်တက်နေချိန်အထိ ချစ်သူရည်းစားမထားဖူးသူ….။
ဆံပင်ဂုတ်ဝဲတွေကြားထဲမှ ဖနောင့်အထိရှည်လျားလှတဲ့….သူမရဲ့ဆံပင်ကို ဘီးစပါတ်ကြီးတကားကားနဲ့ရှိနေဆဲ……. မျက်နှာဝိုင်းသရောင်ရှိပြီး မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်း….နှာတံပေါ်ပေါ် အရပ်ကမနိမ့်မမြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတောင့်တင်းပြည့်ဖြိုးလွန်း၏။ မို့မောက်လုံးဝန်းနေတဲ့ရွေရင်စုံ….သေးသွယ်သောခါး…..စွင့်ကားရမ်းခါနေတဲ့တင်….. မြင်ရသူပုရိသများ ပြစ်မှားချင်စရာကောင်းလှသည်။ မောင်မောင်ဆိုသည်ကလည်း။
ဆယ့်လေးဆယ့်ငါး နှစ်၊မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကထဲက အတူနေအတူအိပ်နေလာသူ…..တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမဖြစ်ခင် အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကျမှ တကုတင်စီခွဲအိပ်ကျပေမဲ့ အခန်းကတော့ တစ်ခန်းထဲပင်….ယခင်ကတော့ဘယ်လိုမှမဖေါက်ပြားကြ……ရေတောင်မှနှစ်ယောက်အတူချိုးတဲ့အခါချိုးပြီး ခေါင်းလျှော်တဲ့နေ့တွေမှာ မောင်မောင်ကိုယ်တိုင် ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင်ကိုဖြီးသင်ပေးခဲ့ရတာအကြိမ်ကြိမ်ပင်…….. ကနေ့တော့ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ……..။
အေးအေးမော် စောစောကတယောက်ထဲရေချိုးနေရင်း မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားဆိုင် တွေဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်လိုက်မိပြီး မတောင်းတစဖူး တစိမ်းတရံယောက်ျားနဲ့ ကာမခရီးကို လျှောက်လှမ်းချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာသည်အထိဖီးလ်တွေအရမ်းတက်လာမိ၏။ မောင်မောင်ဆိုသည်ကလည်း လက်တွေ့သာမလိုးဖူးသေးပေမဲ့ အရပ်ထဲမှ ညမီးကင်းစောင့်ရင်း လူပျိုကြီးကိုထွန်းမောင်ရဲ့လက်တွေ့ပို့ချချက်တွေ နားရည်ဝနေသလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တခါတခါ ဖူးလ်ကားတွေကြည့်ရင်းက မြင်တွေ့ထားသမျှ မျက်စေ့ထဲစွဲမှတ်နေသူဖြစ်သည်။
ယခုလည်းကြည့် အေးအေးမော်ရဲ့နွုတ်ခမ်းတွေ ပါးတွေကိုစုပ်နမ်းပြီး သူမရဲ့ရွေရင်ဖြိုးဖြိုးတဘက်ကို ပါးစပ်ဖြင့်ငုံခဲ၍ကလေးများနို့စို့သလို တပြွတ်ပြွတ် အသံထွက်အောင်စို့၍ ကျန်နို့တဘက်ကိုလက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ဆုပ်ချေပေးနေသလို မာခဲနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားမှညှပ်ပြီး ပွတ်နေလိုက်လေ၏။ “……ဟင်း….ဟင်း…..အား……ဟင့်…..ဟင့်……” အေးအေးမော်ရဲ့နွုတ်ဖျားမှ မပီဝိုးတဝါး ငြီးငြူသံတစ်ရပ်ထွက်ပေါ်လာလေသည်။
နို့ကို သူ့ရဲ့အာနွေးနွေးကြီးနဲ့ငုံခဲပြီး ကလေးတွေလိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တော့ ကျမလေ ခါးလေးကော့သွားပြီး တကိုယ်လုံးတုံသွားရတယ်……။ နောက်ပြီး ဘယ်လိုဖော်ပြရမှန်း မသိတဲ့ ခံစားမွုတစ်မျိုးကလည်း အသဲတွေကလီဇာတွေပြုတ်ထွက်လုမတတ် ခံစားမိရတယ်…… နို့သီးခေါင်းလေးကိုပွတ်ချေလိုက်တဲ့အခါမှာ တကယ်ပါဘဲ……တကိုယ်လုံး ကျင်တက်သွားပြီး ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲက စစ်ကနဲ……စစ်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး အရေတွေကျကုန်ပြီရှင့်……။
ဟောကြည့်……ဘယ်အချိန်ကချွတ်ပစ်လိုက်မှန်းမသိဘူး……ခါးမှာထဘီမရှိတော့ဘူး ပြည့်ဖြိုးတင်းမာနေတဲ့ကျမရဲ့ပေါင်တွင်းသားတွေကို သူ့လက်တဘက်က ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်သပ်နေပြန်တယ်…….ဟင်း……အင်း…….ဟင့်…..” ယား…….ယားလိုက်တာရှင် ဘယ်လိုနေရမှန်းမသိတော့ဘူး…..ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထကုန်တယ်…..ခြေဖျားလက်ဖျားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုံပြီး ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး…… သူမရဲ့ပေါင်တွင်းသားတွေကို ပွတ်သပ်နေရာမှ။
မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်းနဲ့အလယ်မှာ အကွဲကြောင်းရာလေးကို လက်ခလယ်နဲ့အထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးရင်းမှ စောက်ခေါင်းတွင်းကို လက်ခလယ်နဲ့ထိုးမွေပေးလိုက်ပြန်တော့ သူမပေါင်နှစ်ခေါင်းဘေးသို့ကားသွားလေတော့သည်။ အား…..အင့်….ဟင့်……စွိ….စွိ…..စွတ်…..စွတ်… မပီဝိုးတဝါးအသံလေးတွေထွက်လာသည်……အခုနေတော့ ဘေးချင်းယှဉ်နေရာမှ မောင်မောင်သည် သူမ၏ရင်ဘတ်ပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်သည်…….. ။
အလိုက်သင့်ကားနေတဲ့သူမရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာလီးနဲ့…..စောက်ဖုတ်တွေ့ကြပြီး အဝတ်မဲ့အသားနှစ်ခုပူနွေးစွာထိကပ်မိလိုက်ကြသည်။ “……ဟင်း…..ဟင်း……အီး..ဟင့်……” မောင်မောင်ရဲ့နွုတ်မှ……အမည်မဖော်စွမ်းနိုင်သော ငြီးငြူသံတစ်ရပ်ပြုလိုက်မိသည်။ မောင်မောင် သူမရဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်လိုက်၏။သူ၏လိင်တန်မှာလည်း တဆတ်ဆတ်တုံကာ လိုးချင်စိတ်နှင့်မာထန်ပြီး ထွားလျှက်ရှိ၏။
သူ၏လီးကြီးမှာ အေးအေးမော်ရဲ့စောက်ဖုတ်အထက်နားမှာ အလျားလိုက်မေးတင်ဖိကပ်ထားရာ မာထန်ကြီးထွားနေတဲ့ လီးက အေးအေးမော်ရဲ့ဗိုက်သားကိုထောက်မိနေရာ ပူနွေးသောအထိအတွေ့တစ်ရပ်ကို ခံစားမိသည်။ တဖြည်းဖြည်း လူးလွန့်နေသော အေးအေးမော်ရဲ့မျက်နှာလေးမှာ ရမ္မက်သွေးကြောင့် ရဲရဲတွတ်နီကာ ချွေးစီးလေးများဖြင့် ပြောင်လက်၍နေ၏။ နက်မှောင်သောဆံစလေးများ ကလည်း သူမ၏မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို တချို့တဝက်ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိရာ မကြာခဏ လက်ဖျားဖြင့်ဖယ်ရှားနေရရှာ၏။
နက်မှောင်သော မျက်တောင်ကော့ကော့ကြီးများက အရည်လဲ့နေသော မျက်လုံးကို တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ခတ်ဖုံးအုပ်စေပြန်သည်။…..ရုန်းကန် ဖယ်ရှားငြင်းဆန်ရမည့်အစား သူမ၏လက်များက မောင်မောင်ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ဆုတ်ချေဆွဲဖက်လျှက်ရှိနေပြန်သည်။ မောင်မောင်မှာလည်း ဆန္ဒတွေပြင်းထန်လာပြီး ဖြစ်သမို့အေးအေးမော်ရဲ့ အဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အလျားလိုက်မှောက်နေရာမှ ဖင်ကြီးကိုတဖြေးဖြေးကြွလာ၏။
ထိုအခါ လီးထိပ်ကြီးက အေးအေးမော်၏ဆီးခုံပေါ်မှနေ၍ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း အတိုင်း တဖြေးဖြေးလျော့ကျဆင်းလာသည်။ အဲဒီတဒင်္ဂအတွင်းမှာ ပွတ်တိုက်မွု၏အရသာမှာ မတွေ့ဘူးသော မမေ့နိုင်စွမ်းသော အထိအတွေ့ကို ပူထူရှိန်ဖိန်းပြီး သိမ့်သိမ့်လွုပ်ခါလာကြသည်။ “……..ဟင်း…..ဟင်း……..ဟင်း……ဟင်း…….” ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ ယမ်းခါလူးလှိမ့်ရင်း ကာမ၏အလျက်ဓာတ်စိမ့်ဝင်စီးဆင်းမွုဒဏ် ကို အေးအေးမော်အလူးအလဲခံစားနေရသဖြင့် တဟင်းဟင်းငြီးငြူလိုက်မိရ၏…… စောက်ခေါင်းဝကို ပူနွေးသောမောင်မောင်၏လီးထိပ်အထိအတွေ့ကြောင့် သူမပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့အစွမ်းကုန် ကားလိုက်မိသည်။ ပြလွတ်……ကနဲ အသားခြင်းပွတ်တိုက်သံတိုးတိုးလေးထွက်လာပြီး လီးထိပ်က အေးအေးမော်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကျွံကျသွားတော့၏……… ပြီးပါပြီ။
စူပါစတား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် မော်ဒယ်အေဂျင်စီ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကခမ်းနားသလို အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ကလည်းခမ်းနားသားနားလှသည်။ ထိုအေဂျင်စီရုံးခန်းထဲ၌လူရွယ်တစ်ယောက်စာရွက်စာတမ်းတွေကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်များနေသည်။ ထိုစဉ် … အစ်ကို ကျွန်မအင်တာဗျူးအတွက်လာတာပါ အသံကြားရာဖက်ကိုလူရွယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အဖြူရောင်အကျီင်္ကိုယ်ကြပ် အပေါ်အောက်တစ်ဆက်တည်း နှင့် ဒေါင်ဖိနပ်အဖြူရောင်လေးကိုစီးထားပြီး ဆံပင်ခွေခွေလေးတွေနဲ့ ဘော်ဒီအကိတ်အလန်းစားကောင်မလေးတစ်ယောက် … အော နာမည်က … ဖြူဖြူဇော်ပါ … တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော်ကသူရပါ … ဟုတ်ကဲ့ ကိုသူရ၊ ဖြူလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် … လာတာအချိန်ကိုက်ပဲ ချိန်းထားတာ ၂နာရီခွဲနော် … ဟုတ်ကဲ့ … ဖြူဖြူဇော်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေဘာတွေကောပါခဲ့တယ်မလား … ပါခဲ့ပါတယ် ဒီမှာပါကိုသူရ … သေချာပြင်ဆင်လာခဲ့တာပဲ ကောင်းတယ် … ကျေးဇူးပါ … ကဲ ရုံးခန်းထဲမှာအေးဆေးထိုင်ပြောကြတာပေါ့ … ဟုတ် သူရဖြူဖြူဇော်ကိုအရှေ့ကောင်တာကနေသူ့ရုံးခန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။ ရုံးခန်းထဲရောက်တော့ ပြောင်လက်နေတဲ့အနက်ရောင်ဆိုဖာခုံတစ်ခုံကိုညွှန်ပြလိုက်ရင်း … […]
ကျနော်ဒီစက်ရုံရောက်ပီး ၅ လလောက်အကြာမှာ သူမတို့အတွဲ ရောက်လာပါတယ်..သူမနာမည်က စွန်းတဲ့ မြန်မာလို လိမ္မော်သီးပေါ့.. ထိုင်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲ အတူ့နေ ပိုက်ဆံအတူစုပီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ပီးမှ လင်မယားအရာရောက်တာမို့ ကြားထဲမှာ ပြတ်သွားပီး အသစ်ရှာကြလည်း တော်ရုံ ဂရုမစိုက်ကြပုရယ်… ရောက်ပီးမကြာပါပု တစက်ရုံလုံးရဲ့ တဦးထဲသော မြန်မာလူမျိုး ကျနော်နဲ့ ခင်သွားပီး လက်ဖက်သုတ်ကို မပီကလာပီကလာပြောပီး ကြိုက်တတ်လာသလို သနပ်ခါးလည်း လိမ်းတတ်လာတယ်…ကျနော်နဲ့ ငါးအတူမျှား ဘူဖေးသွားစားတယ်.. ဖဲရိုက်တယ်လေ… သူ့ဘဲက ကျနော်တို့ ဖဲရိုက်နေရင် ဘီယာမူးနေတာ များတယ်… ကြာလာလေ ရင်းနှီးမွုပိုလာတော့ မထိတထိလေး တွေပြောလာတယ် နောက်ပိုင်း အစအနောက်သန်တဲ့ ကျနော့်အကြောင်း ပိုသိလာတော့ ပိုရဲတင်းပီး ပေါက်ကရတွေ ပြောလာတယ်လေ … ကျနော်တို့ စက်ရုံမှာလည်း သူတစ်ယောက်ပဲ လန်းပီး […]